Pitanga, Izibonelelo kunye neepropathi zeziqhamo ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
I-pitanga, njenge copoazú, sisiqhamo saseBrazil esiqhelekileyo kwaye sifumaneka kwimimandla yeAmazon kulo lonke elaseMzantsi Melika. Obu buncwane bokwenyani bugcwele izondlo ezilungileyo kwaye zinokusinika izibonelelo ezininzi zempilo. Ukubonakala kwayo kuyathandeka: incinci kwaye iorenji okanye bomvu xa ivuthiwe.
1 Izibonelelo zePitanga
1.1 Phefumla ngcono
1.2 Ukulawula isifo seswekile
1.3 Iphantsi kwii-carbohydrate
1.4 Umthombo wefiber
2 Ungayisebenzisa njani i-pitanga
3 Uyilungisa njani iti yepanga
I-pitanga ilungele abo baneengxaki zokuphefumla. Ke, iyakwazi ukuphucula imisebenzi yemiphunga yezigulana ezine-dyspnea yokuphefumla okuphawuleka ngokuphefumla ngokukhawuleza nangokufutshane.
Ukulawula isifo seswekile
Ayisiyiyo loo nto kuphela, ineeanthocyanins, izakhi zombala ezinika iziqhamo ezininzi umbala omfusa nobomvu, onokonyusa amanqanaba e-insulin emzimbeni.
Ukongeza, iPitanga sisiqhamo esifanelekileyo kwabo balandela ukutya okuneecarbohydrate ezisezantsi. Iphantsi kwiikhalori kwaye iphantsi kwiicarbohydrate.Iigram ezili-100 zesi siqhamo zinee-10,2 gram zeecarbohydrate. I-Ally kukutya kunye nokulahleka kobunzima.
Ngaba ufuna ukuphuculwa kokusebenza kwamathumbu? Esi siqhamo sinokukunceda. Iziqhamo ezincinci ngumthombo omkhulu wefayibha. Imisonto ibalulekile ekutyeni kwaye kufuneka yenze icandelo layo. Emva kwayo yonke loo nto, ukusebenza kakuhle kwamathumbu kubalulekile kumzimba ophilileyo ngokupheleleyo. Ngale ndlela, yongeza i-pitanga kwisidlo sakho kwaye ukuphuculwa kuya kucaca.
Ungayisebenzisa njani i-pitanga
Ukutya iziqhamo, nokuba kunjani na, kuhlala kuyeyona nto ilula kunye neyona isebenzayo, nangona kunjalo, zihlala zikhona iindlela zokuvuselela amava. Ke ngoko, zazi ezinye iindlela zokusebenzisa i-pitanga:
Uyilungisa njani iti yepanga
Okokuqala, iti yenziwe ngegqabi le-pitangueira kwaye kufuneka ilungiselelwe njengayo nayiphi na enye iti yemifuno.
Bilisa ikomityi enye yamanzi, cima ubushushu kwaye ubeke amagqabi aseleyo kumthi we-pitanga. Vumela umxube ugalele imizuzu eli-1 ubuncinci. Emva koko, kuya kufuneka uhluthe kwaye usele leti imnandi kwaye inesondlo.